7 Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu
I-Europe inamasiko nomlando ocebile kakhulu, okwenza kube indawo yokuvakasha evamile phakathi kwabahambi abaphezulu. Iminyuziyamu, amapaki, izimpawu ezihlaba umxhwele, nokukhethwa okuhlukahlukene kokudla kwezindawo zokudlela. Kafushane, uma usuthathe umhlalaphansi kunezindlela eziningi ezinhle zokuzicwilisa kunoma yiliphi idolobha eYurophu. Nokho, amadolobha ambalwa kakhulu okulula ukuzulazula nokuwathola kubahambi abaphezulu. Lapho uhlela iholide lakho eYurophu, okudingwa yilowo nalowo ohamba ngezinyawo izinga lakho lokuqina, ukutholakala kwe ezikhangayo ezinkulu nemisebenzi, izinto zokuhamba ezinhle kakhulu, ngaphezu kwesabelomali nesikhathi samaholide.
Ngakho, sikhethe amadolobha ambalwa ahamba phambili ukuwavakashela eYurophu kubahambi abahamba phambili. Ngakho, wamukelekile ukulandela uhambo lwethu ku 7 amadolobha amakhulu anobungani eYurophu.
1. Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu: Rome, Italy
IRoma idolobha elihle ukuvakashela eYurophu kubahambi abaphezulu. Edolobheni lasendulo iRoma, ezikhangayo kakhulu, amahhotela, nezindawo zokudlela zitholakala ngokuphelele kubantu abadala esihlalweni sabakhubazekile. Lokhu kusho ukuthi imigwaqo yedolobha yonke inemizila yezihlalo ezinamasondo, nomuzi ngokwawo uyisicaba, ngakho-ke akunandaba nezinga lakho lokuqina, uzokuthola kulula kakhulu ukuhamba uzungeze.
Ngenkathi iRoma igcwala impela kwisizini ephezulu, uma u ukuhamba off-isizini, ekwindla, Ngokwesibonelo, uzothola iRoma cishe ngokuphelele kuwe. Ngaphezu kwalokho, amahhotela nezintengo zokuhamba zivame ukwehla kwisizini, Ngaphezu kwalokho, akudingeki ukhathazeke ngokuqasha imoto, ngoba ungahamba kalula ukuya eRoma usuka noma yikuphi lapho uya khona eYurophu ngesitimela. Akukho lutho olungelula ukwedlula travel isitimela ezitimeleni eziphakeme zanamuhla nezithuthukile zikaTrenitalia. Ngaphezu kokududuza kanye nensiza enhle yesitimela, ungakwazi ukujabulela izaphulelo ezikhethekile kumathikithi wesitimela wabantu abadala.
UMilan uya eRoma ngesitimela
UFlorence waya eRoma ngesitimela
UPisa waya eRoma ngesitimela
INaples iya eRoma ngesitimela
2. Milan E-Italy
UDuomo noLeonardo De Vinci ‘Isidlo Sokugcina’ benza iMilan ipharadesi labathandi bezobuciko nomlando. Ngaphandle kokuba yigugu lobuciko bokwakha, UMilan unomusa kakhulu kubahambi abaphezulu futhi uye wawina ngisho a 2016 Umklomelo Wokufinyelela we-EU. Ngakho-ke iMilan ingelinye lamadolobha amahle ukuvakashela eYurophu kubahambi abaphezulu.
Uma uphumelele iminyaka engama-60 futhi ukulungele ukuphila okuhle, khona-ke uzoba nesikhathi esimangalisa ngokuphelele eMilan. I cuisine Italian, le izakhiwo emangalisa of Basilicas, zobuciko, futhi iminyuziyamu izokwenza uzizwe ubukhosi. Lapho eseMilano, kufanele ujoyine isigaba sokupheka se-pasta ngoba asikephuzi kakhulu ukuthi sifunde iresiphi yesithelo se-pasta esiphelele ukuze ukwazi ukuphinda ubuye nge-la dolce vita ekhaya.
3. Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu: esetshenziswa, Belgium
Abanye bathi iBruges yidolobha eliphakathi elilondolozwe kahle kunazo zonke eYurophu. Imigwaqo yeCobblestone, izindlu ezimibalabala, Izakhiwo ze-Gothic, konke kwenza iBruges ibe indawo enhle yokuhamba eYurophu kubahambi abaphezulu. Ngaphezu kwalokho, kukhona imisele lapho ungahamba khona ngesikebhe futhi ujabulele iBruges ngaphandle kokwenza igxathu, okuhlangenwe nakho okwenziwa yiluphi na ophakeme. kodwa, uma usafuna ukuthola idolobha ngezinyawo, Azikho izinkinga, IBruges yidolobha elihlangene kakhulu. Ngakho, ilungile kubahambi abaphezulu kunoma yiliphi izinga lokuqina.
Kufanele unikezele okungenani 3-4 izinsuku zokuhamba ngomkhumbi 80 yemisele yedolobha futhi uphumule echibini iMinnewater. Omunye umsebenzi omuhle eBruges yimakethe yokuthenga okuyisikhumbuzo komndeni.
Isiteshi sesitimela esiphakathi eBruges cishe 10-20 imizuzu uhamba ukusuka enkabeni yedolobha, ngakho-ke ungahamba noma kuphi eBelgium nase-UK.
IBrussels eya eBruges ngesitimela
I-Antwerp to Bruges ngeSitimela
IBrussels ukuya eVienna ngesitimela
UGhent kuya eBruges ngesitimela
Izitimela ezivela eParis, Basel, Zurich, kanye neMunich, Idolobha laseBaden-Baden litholakala kakhulu kubahambi abaphezulu. Ngenkathi akuyona idolobha elikhulu le-cosmopolitan njengeBerlin, yisibonelo sokuphila okuhle. IGermany iyikhaya 900 izindawo zokungcebeleka ze-spa, kepha izindawo zokungcebeleka zeBaden-Baden futhi zibakhiphe bonke.
Iholide le-spa eBaden-Baden iyindlela enhle yokuvakasha yabahambi abaphezulu eYurophu. Ijubane lokuthula, ukwelashwa kwe-spa yamaminerali nodaka, izingadi ezinhle njengama-Paradies, dala ucezu lwezulu. Nokho, uma nithanda ukuhlala nisebenza ngamaholide, bese kukhona izifundo zegalofu nezemidlalo e Baden-Baden ngawe ukuvakasha.
Abahambi abadala eYurophu bangase bakuthole kunzima emadolobheni amaningi ukuhamba kuwo, ngenxa yamagquma nemigwaqo enamagquma. Ngakho, kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi idolobha lamaphupho akho lihamba phambili ngamakhono akho omzimba. Ukuhambela idolobha elifanelekile elinobungani eYurophu kubaluleke kakhulu njengomshuwalense wokuhamba. Okuphezulu kwethu 7 amadolobha okufanele avakashelwe ngabahambi abahamba phambili afaka phakathi amadolobha afinyeleleka kakhulu eYurophu kubantu abadala.
IBerlin iye eBaden-Baden ngeSitimela
UMunich ukuya eBaden-Baden ngesitimela
I-Zurich kuya eBaden-Baden ngeSitimela
I-Basel eya eBaden-Baden ngeSitimela
5. Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu: Berlin, Germany
Iminyuziyamu kanye nezimpawu zomhlaba ezihlobene ne-WWII nempi ebandayo, yenza iBerlin ibe indawo esabekayo yabahambi abaphezulu eYurophu. IBerlin iyisicaba futhi izinto zokuhamba zomphakathi zihle kakhulu, womabili amabhasi angaphansi komhlaba. Uma usezingeni elifanelekile lokuqina, ungahlola idolobha ohambweni lweSegway.
Amapaki amaningi aluhlaza waseBerlin alungele imingcele yantambama kanye nepikinikini, nemibukiso yezobuciko iyindlela enhle uma ukhetha umsebenzi othule kakhulu nosiko kunokuzula esikhungweni esiphithizelayo.
6. Amsterdam, Abase Netherlands
Neziteshi zayo ezinhle, I-Amsterdam ihlala iyindawo enhle yokuvakasha yabahambi abaphezulu eYurophu. I-Amsterdam ingelinye lamadolobha amahle ukuvakashela eNetherlands, sibonga ama-vibes ayo nosayizi. I-Amsterdam incane uma iqhathaniswa namanye amadolobha aseYurophu, ngakho-ke awudingi ukugijima futhi ukhathazeke ngokubona.
Uma ukhathala ngomuzi omatasatasa, inhloko ngaphandle kwedolobha kuya kumamayela adumile noma Tulip amasimu, uma uhamba ngesikhathi sentwasahlobo. Noma uma usesimweni esihle somzimba, ukuqasha ibhayisekili futhi ukuhamba ngebhayisikile uzungeze idolobha elihle ebukekayo kungumqondo owesabekayo.
7. Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu: Vienna, Austria
Ukwakheka okumangazayo, opera, nezigodlo zasebukhosini zenza iVienna indawo enhle yokuvakasha yabahambi abaphezulu. Uma usufinyelele kuleyo nkathi yamahhala yezinkathazo empilweni lapho ungavele uhlale phansi ujabulele izithelo zomsebenzi onzima, bese ulibangisa eVienna. Ngaphezu kwalokho, IVienna iyidolobha lesibili elifinyeleleka kalula eYurophu kubavakashi abaphezulu abahamba ngemikhawulo.
Izindlu zekhofi zase-Austrian 'amakamelo okuhlala' zisebenzela amakhekhe nama-schnitzel wase-Austrian, qiniseka ukuthi ngokuqinisekile uzoba nokuhlangenwe nakho okungasoze kwalukhohlwa. Engxenyeni yamasiko ohambo vakashela indlu enhle ye-opera ngombukiso. Ngemva kwakho konke, IVienna kulapho uMozart noSchubert baqamba izingcezu zabo ezinhle, idolobha lomculo nezobuciko.
Isigodlo saseBelvedere ngenye yezindawo okufanele zibonwe eVienna, uzungezwe izingadi zezimbali nemithombo, kuyindawo yokuhlala emuva futhi ujabulele.
Isizinda sedolobha silungile 5 imizuzu kude nesiteshi esikhulu sesitimela. Ngakho, uma ufika uqhamuka emazweni angomakhelwane, akukho okulula njengokuhambela eVienna.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amadili amathikithi wesitimela ashibhile kakhulu nemizila yokuhamba iya kunoma yimaphi amadolobha akuhlu lwethu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Amadolobha Ahamba Phambili EYurophu Ukuhambela Abahambi Abakhulu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-visit-senior-travelers%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)